Ukuphupha iMarshmallow Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
IMarshmallows iphakathi kwezinto ekuthiwa ziimveliso zeswekile egwebu. Uninzi lwazo luqulathe iswekile. Ezinye izithako yiprotein yekhephu, iiarhente zejeli, imibala kunye nencasa.
Igama elithi "marshmallow" livela kwilizwe elithetha isiNgesi. Kumazwe athetha isiJamani, le sweet isoloko ibizwa ngokuba yiMäusespeck, njengoko ihlala isenziwa imile yegundane.
EUnited States, ii-marshmallows zithandwa kakhulu ngabantwana kunye nabantu abadala. Oku akusetyenziswanga nje njengeeqebengwana zekhekhe okanye zeekhekhe. Banokufunyanwa njengokuhombisa kwiitapile kuMbulelo. Ukongeza, ezi iilekese zihlala zosiwe emlilweni emva koko zityiwe kunye neetshokholethi kunye namaqebengwana amnandi njenge "S'Mores".
IMarshmallows ibonakala rhoqo kwiziganeko ezithile zamaphupha kunezinye. Ngoku funda malunga nokuba anokuthetha ntoni loo maphupha.
1 Isimboli yephupha «iMarshmallow» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukugoba i-marshmallows ephuphayo, hmm!
1.2 Nditya i-marshmallows ngelixa ndilalayo, ngoba?
2 Uphawu lwephupha «iMarshmallow» - Ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «iMarshmallow» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «iMarshmallow» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «iMarshmallow» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukugoba i-marshmallows ephuphayo, hmm!
Ukucoca kunye nokunyibilikisa i-caramel eswekile phezu komlilo ovulekileyo ngokuqinisekileyo yayiliphupha elimnandi. Mhlawumbi ude unuke nemarshmallows eshushu ngelixa ulele? Kuhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha, i-marshmallow egcadiweyo ibonisa amandla amakhulu angaphakathi.
Nditya i-marshmallows ngelixa ndilalayo, ngoba?
Liliphupha elingaqhelekanga apho utya khona kuphela i-marshmallows. Akumangalisi kangako, ngokuchaseneyo. Ngelishwa, i-confectionery ene-foam ikakhulu ibonisa impikiswano eza kumntu ophuphayo. Nangona kunjalo, ukuba uhoya kwaye wenze ngokwezopolitiko kungekudala, unokuthintela okubi kakhulu. Yiba nobubele kwabo bakungqongileyo!
Uphawu lwephupha «iMarshmallow» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ngenxa yomxholo ophezulu weswekile, ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika i-marshmallow njengophawu lwephupha ikakhulu njenge uphawu oluhle. Umphuphi uqhele ukuba nomzuzu omnandi phambi kwakhe, apho anokujikela "kumacala amnandi" obomi.
Ukutya i-marshmallows ngamanye amaxesha kunokuba ingxaki kunye nokulwa komqondiso. Ngelixa ezi zingayi kuba nkulu okanye zibaluleke, ziya kuhlala ziphazamisa. Ukuba umntu usela ephupheni ikomityi yetshokholethi eshushu enemarshmallows encinci, oku kungabonisa ukuba umntu ulangazelela ukhuseleko ngakumbi nothando ngaphakathi el mundo yomlindo.
Njengomhombiso kwikhekhe, ipayi okanye ikuki, iimarshmallows emaphupheni zihlala zibonisa uphuhliso olumnandi kwinyani. Iikeyiki zikaMarshmallow zihlala zingumfanekiso ophuphayo ngaliswa okanye uqalise umsitho obalulekileyo. Ukubona iziqhamo kunye ne-marshmallow kabobs ngelixa ulele kuhlala kuqondwa njengophawu lwethamsanqa kunye nempumelelo.
Ukutolikwa ngokubanzi, umbala we-marshmallows unokuba nomdla. I-marshmallows emhlophe inokulumkisa umntu ophuphayo ukuba angabikho kwihlabathi elivukayo efanelekileyo uphendula kwizinto ezithile. Ukuba i-bacon ipinki ephupheni, akufuneki umntu avale amehlo akhe kwinyani kwaye alahleke kakhulu emaphupheni emini.
Uphawu lwephupha «iMarshmallow» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kutolika uphawu lwephupha "umgxobhozo" ngengqondo yeswiti. Ke ngoko, iphupha elinjalo lingakhokelela ekubeni uqhelane nale ikhoyo ngoku. Imeko yeemvakalelo dibana ne. Inokuba luncedo ukucacisa ezakho iimfuno kunye neemfuno.
Ukuba umntu oleleyo ugoba i-marshmallows ngaphezulu komlilo ephupheni lakhe, mhlawumbi ngelixa ekhempini okanye eluhambeni, uhlala efuna ukuqonda amandla akhe angaphakathi kwindawo yokomoya. Ukuba uphupha ukwenza i-S'Mores kwimarshmallows eyosiweyo, iitshokholethi kunye neicookies zokutya, owona mnqweno wakho ukwanelisa iimfuno zakho zesondo.
Uphawu lwephupha «iMarshmallow» - ukutolika kokomoya
I-marshmallow ethambileyo inokusetyenziswa njengomfanekiso wephupha kwinqanaba eligqithisileyo lohlalutyo lwamaphupha. ukuthozama kwaye ubonise ukwaneliseka komphuphi kwizinto zokomoya.